YEYINTNGE(CANADA): Friday, January 10
ကိုကိုကြီး --- ယုံကြည်မှုအရင်တည်ဆောက်ဖို့လို...
ဦးဥာဏ်ဝင်း --- ပြင်ပြင်မပြင်ပြင်ဝင်ရမှာပဲ....
ဦးဝင်းတင် --- နာခါးလှသဗျာ....
သမ္မတ ..... ပြင်ဖို့ကလွှတ်တော်တာဝန်....
ဦးဌေးဦး ..... တဦးတယောက်အတွက်ပြင်ပေးစရာမလိုဘူး....
ဦးရွှေမန်း .... ပြင်သင့်တာပြင်ရမယ်....
ဦးအောင်သောင်း .... ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက အင်အား နည်းနည်း တောင့်တင်းတဲ့ သဘောရှိတာပေါ့။ NLD ဆို ဒေါ်စုကြည်ပဲ ရှိတယ်။ နောက်လိုက် သိပ်မရှိဘူး။
ကိုမင်းကိုနိုင် .... မည်သို့ဖြစ်စေ ဒေါ်စုကိုဝန်းရံရမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် .... ၅၉(စ)ကကျွန်မကိုဦးတည်ရေးဆွဲသလိုဖြစ်နေတယ်... မပြင်ပေးမှာသေချာတဲ့နေ့ကျရင်ပါတီရဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောပါမယ်။
ဒီကေဘီအေ .... စစ်တပ်ကအာဏာသီမ်းတာမျိုးလုပ်ရင်လက္မခံပါ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/10/20140အကြံပြုခြင်း
““တကယ်တော့ လက်ရှိ အနေအထားအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက အင်အား နည်းနည်း တောင့်တင်းတဲ့ သဘောရှိတာပေါ့။ NLD ဆို ဒေါ်စုကြည်ပဲ ရှိတယ်။ နောက်လိုက် သိပ်မရှိဘူး။ အာဃာတတွေနဲ့ လက်စားချေလိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား၊ အာဃာတကို ဖော်ဆောင်နေ တဲ့ နိုင်ငံရေးသမား၊ မကျေနပ်ချက်ကို အခြေခံပြီး ဖြစ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား၊ အခွင့်အရေးများ ရမလား ဆိုပြီးတော့ ၀င်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်နေတယ်။။ တကယ့်နိုင်ငံရေးကို နားလည် ယုံကြည်ပြီးတော့ NLD ရဲ့ လမ်းစဉ် မူဝါဒတွေ ကောင်းတယ်၊ အဲဒါတွေသာ တိုင်းပြည်ကြီး တည်ဆောက်လို့ ရတယ်၊ အလွန်ကောင်းမှာပဲ၊ ချမ်းသာသွားမှာပဲ၊ အောင်မြင် သွားမှာပဲ၊ ကမ္ဘာကလည်း လက်ခံမှာပဲဆိုတဲ့ ဒီလိုအမြင်နဲ့က နည်းတယ်””
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုအတိုင်ပင်ခံ ဦးအောင်သောင်း
" ဦးအောင်သောင်း ဆိုရင်ပဲ အရင်တုန်းက သူဘာလုပ်လဲ။ ကျောင်းဆရာလုပ်တယ်။ နောက် စစ်တပ်ထဲ ၀င်တယ်။ အာဏာသိမ်းတယ်။ ဒါကို အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလို့ ခေါ်သလား။ သူ့ကိုယ်သူ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး လုပ်တယ်၊ နိုင်ငံရေးသမားလို့ ပြောလို့ရသလား။ နိုင်ငံရေးသမား ဆိုလည်း သူတို့ဟာ ကိုယ်ကျိုးရှာဖို့ အတွက် လောဘဇောတိုက်ပြီးတော့ နိုင်ငံရေး လုပ်ကြတာဆိုရင် ဘယ်လိုဖြေမလဲ"
"ဦးအောင်သောင်း ဆိုတဲ့လူ ကျွန်တော့်ထက် အသက်ကြီးကောင်းကြီးလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ခင်ဗျားလည်း သေခါနီးနေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း သေခါနီးနေပြီ။ လိပ်ပြာသန့်အောင် ခင်ဗျား ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲပြော။ ကျွန်တော့်မှာ လိပ်ပြာသန့်အောင် ပြောနိုင်တဲ့ဟာတွေ ရှိတယ်။"
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတတဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အဖြစ်သာ မြင်တွေ့လိုပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေထဲက ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ဟာ အတိတ်ရဲ့ အမွေတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး Derek Mitchell က ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းထုတ် သတင်းမီဒီယာတွေကို အမေရိကန်သံရုံးက ဒီကနေ့ပေးပို့တဲ့ အထူးမှတ်ချက်မှာ အခုလို ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို သမ္မတဖြစ်ခွင့် ကန့်သတ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မမျိုးကို သူနားမလည်နိုင်ပါဘူးလို့လည်း Mr. Mitchell က ပြောကြားပါတယ်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ၊ ဒါမှမဟုတ် ၁၉၇၄ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွေမှာ ပါတယ်ဆိုရင်တောင် ပြင်ပကမ္ဘာကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့လို့ ထည့်ထားတဲ့ ဥပဒေပုဒ်မဆိုတာ နားလည်လို့ရကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် အခုလို ၂၁ ရာစုအတွင်း ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်သစ်မှာ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ တသားဖြစ်ဖို့ ကြိုးပမ်းရမယ့်ကာလဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် ဒီကန့်သတ်ချက်ဥပဒေနဲ့ ဒီစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုဟာ အတိတ်ရဲ့ ရုပ်ကြွင်းတစ်ခုသာ ဖြစ်နေကြောင်းလည်း Mr. Mitchell က ပြောပါတယ်။
အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးရဲ့ အထူးမှတ်ချက်ကို ရန်ကုန်မှာ ထုတ်ဝေတဲ့ ဧရာဝတီ၊ မဇ္ဈိမ၊7Day နဲ့ Myanmar Times သတင်းစာစောင် ၄ ခုကို သီးသန့်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အဓိက နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၊ အရေးပါတဲ့ လွှတ်တော်ကော်မတီကြီးတစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ အင်အားတွေကို ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးနဲ့ ပြည်သူအများက ထင်ထင်ရှားရှား အားပေးထောက်ခံသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတဖြစ်ခွင့်ကနေ ဖယ်ထုတ်ထားတာဟာလည်း မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးက မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလေးဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ
ဇန်န၀ါရီ ၁၀ ရက်မနက် ၉နာရီအချိန် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ကလေးဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဆန္ဒခံယူပွဲကို
ဂန့်ဂေါ၊ မင်းကင်း၊မော်လိုက်၊ ခန္တီး၊ တမူး၊ကလေးဝ စတဲ့ နယ်မြို့တွေက
Chit Zaw Oo
ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကြိုက်တဲ့သူကို ဖြုတ်ပစ်နိုင်တဲ့အာဏာ ဘယ်သူ့ဆီမှာလဲ
အမျိုးသမီး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ၂ဦးအပါအဝင် ၇ဦးကို စစ်တပ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အစားထိုးပြောင်းလဲဟု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ယနေ့ကြေညာ
သူ ခေါင်းခါရင် တပ်မတော်သားအမတ်တွေလဲ ခေါင်းခါလိမ့်မယ်
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်- ဩစတြေးလျနိုင်ငံ-ဆစ်ဒနီမြို့- Nov 27, 2013)
တပ်မတော်သားအမတ်အားလုံးကို ကာချုပ်က ခန့်အပ်ပါတယ်။
ဘယ်သူ့ကိုအမတ်ခန့်မယ် ဘယ်လောက်ကြာကြာခန့်မယ်ဆိုတာ ကာချုပ်ကပဲ ဆုံးဖြတ်တယ်။
ခန့်အပ်ခံအမတ်ဟာ နောက်ရွေးကောက်ပွဲအထိ ဒီရာထူးရသွားတာ မဟုတ်သေးပြန်ဘူး။
သူကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူကြိုက်တဲ့သူကို အချိန်မရွေး ဖြုတ်ပစ်နိုင်တဲ့အာဏာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှာ ရှိနေတာကိုး။
အခြေခံဥပဒေကို ပြင်မလားမပြင်ဘူးလား ကာချုပ်က ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိသွားတယ်။
သူက ခေါင်းငြှိမ့်ရင် တပ်မတော်သားအမတ်တွေလဲ ခေါင်းငြှိမ့်လိမ့်မယ်။
သူ ခေါင်းခါရင် တပ်မတော်သားအမတ်တွေလဲ ခေါင်းခါလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ ကျမ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ ရှင်တို့ကိုမေးလိုက်မယ်....
"ပြည်သူရွေးကောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်က ပြင်မယ်/မပြင်ဘူး
ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိနေတဲ့ လက်ရှိအခြေခံဥပဒေကို ဒီမိုကရေစီအခြေခံဥပဒေလို့ ဘယ်လိုကြည့်ပြီး ခေါ်နိုင်တာလဲ??"
အခန်နံပါတ် (၁) ကိုမရလို့ ဒေါ်စုကပဲ စိတ်ဆိုးပြီး မတည်းတော့သလိုလို ဘာလိုလို
အခန်း (၁) ကတော့ အစဉ်အလာအရ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ အတွက် သတ်မှတ် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုသမ္မတနဲ့ လွှတ်တော်နာယကကြီးတို့ လာရောက်စဉ် မှာလည်း အခန်း ၂ မှာပဲ တည်းခို နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးရဲထွဋ်ေ၇..သေချာစုံစမ်းပြီးမှပြောပါ...အ မေစုဟာ အဲဒီလို လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ.လူတိုင်းသိတယ်....တော်ကြာ NLDက ထ၇ှင်းမှ အ၇ှက်တွေကွဲနေဦးမယ်..
ဦးရဲထွဋ် ကတော့ပြောပြီ NLD က အခန်း(၁) တောင်းဆိုခဲ့သလား ဆိုတာ ရှင်းလင်းရမလိုဖြစ်နေပြီ၊
သူ.အရေးအသားအရ အခန်း(၁) မရလို. မတည်းတော့သလို ဖြစ်နေပြီ တာဝန်ရှိသူများရှင်းကြပါဦး
ဦးရဲထွဋ် ပို့ စ်ပါ....
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ချင်းပြည်နယ်ခရီးစဉ်အတွင်း ဟားခါးမြို့မှာ တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့ရမှုအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရက စီစဉ်ပေးမှုမရှိဘူးဆိုပြီး ပြောဆိုမှုတွေကို မီဒီယာများမှာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းသိရှိရတဲ့ အခြေအနေများကိုတင်ပြအပ် ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တည်းခိုနိုင်ဖို့အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရမှ ပြည်ထောင်စုရိပ်သာ အခန်း(၂ ) အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက်လည်းကောင်း၊ PSO နှင့် လုံခြုံရေးဟုသူ ပေါင်း( ၁၀ )ဦးအတွက် ယခင်က ၀န်ကြီးများလာရောက်လျှင် တည်းခိုနေထိုင်လေ့ရှိသော ( ၂ )ယောက်ခန်းအမှတ် ( ၄/၅/၆ ) နဲ့ PSO ခန်း COMMON HALLအား ပေးခဲ့ပါသည်။
အခန်းအရေအတွက်သာလျာထားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နေရာချထားမှုကို NLD အစီစဉ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ အခန်း (၁) ကတော့ အစဉ်အလာအရ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ တွက်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုသမ္မတနဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက ကြီး တို့ လာရောက်စဉ်မှာလည်း အခန်း ၂ မှာပဲ တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က ပြည်ထောင်စုရ်ိပ်သာမှာ ဟိုတုံးထဲက ရောက်ရှိတည်းခိုနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ၄ ဦးအပါအ၀င် ဧည့် သည်များကိုတော့ ရိပ်သာရဲ့နောက်ဘက် အခန်းငယ်များမှ နေရာချထားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ပန်းကန်ခွက်ယောက်များငှားရမ်းရန်ပြောကြားတဲ့အတွက် ၁၅ ဦးစာပန်းကန်ခွက်ယောက်များနဲ့ ရိပ်သာ မှာ ချက်ပြုတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်နေ့ ညနေမှာ ချင်းပြည်နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးရာကျုံး က ရိပ်သာမှာမနေတော့ဘဲ ချယ်ရီတည်းခိုခန်းမှာပဲ နေထိုင်မယ်လို့ လာရောက်အကြောင်း ကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေး ဒေါက်တာ နေဇင်လတ်ပိုင်ဆိုင်သော ဟိုတယ်၌ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှု့များရှိနေ
( Unity Journal -10-1-2014)
ဆရာစံလမ်းရှိ AMBO ဟိုတယ်မှာ ဒေါက်တာနေဇင်လတ်ပိုင်ဆိုင်သောဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်၊
အခန်းက သုံးသောင်းပေးရပြီး၊ ဝိတ်တာတွေက ကောင်မလေးတွေနဲ့ပျော်ပါးချင်ရင် ခေါ်လာပြပေးပါတယ်၊ လေးငါးယောက်လောက်ခေါ်လာပြပြီး ကြိုက်ရာရွေးခေါ်လို့ရကြောင်း သိရှိရပါသည်၊ အခန်းခရော ကောင်မလေးခေါ်ခပါ ထည့်တွက်ရင် ၆၅၀၀၀ လောက်ကျခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့သူတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်၊
၄င်းလည်းဟော်တယ်တွင် အခန်းပေါင်း ၃၀ခန့်ရှိပြီး အစိုးရဘက်ပိုင်းလူကြီးများ ဝင်ထွက်သွားလာလေ့ရှိကြောင်း ၄င်းဟော်တယ်မှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဖြေကြားပေးသွားပါတယ်၊
သူဌေးကတော့တစ်ခါတလေ လာတယ်၊သူဌေးမိန်းမကတော့ နေ့ခင်းဘက်ရုံးထိုင်တယ်၊ လာတဲ့လူကြီးတွေ နာမည်တော့မသိဘူး၊ ဦးနေဇင်လတ်အခန်းထဲမှာ တွေ့ဆုံကြတာမျိုးလည်းရှိကြောင်း အဆိုပါဝန်ထမ်းမှ ဖြည့်စွပ်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်၊
အထက်ပါကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းကျော်အုန်းက “ ဒီလို ဟိုတယ်တွေမှာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေ့ရင်တော့တားဆီးရမှာပေါ့၊ စည်းကမ်းအရ ခွင့်မပြုဘူးလေ၊ အခုတော့ တင်ပြထားတာမရှိသေးပါဘူး၊ တိုင်ကြားလာရင်တော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခေါ်ယူသတိပေးမယ်၊ ဒါမျိုးက နိုင်ငံတော်မှာ မရှိဘူးလေ၊ နိုင်ငံတော် image လည်း မကောင်းဘူး” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်--။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ဝန်းအတွင်းရှိ NLD အလံအား အမည်မသိ လူတစ်ဦးမှခိုးယူဖြုတ်ချ
ခွန် ဒီးယမ် တရုတ်အလံကိုထိတဲ့သူတွေတော့ထောင်ချတယ်...ဒီတခါအာဏာပိုင်တွေဘာလုပ်မယ်ထင်လဲ....
အလံခိုးတဲ့ကိစ္စဟာ ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူး .... နေ့ခင်းကြောင်တောင်ဆိုတော့ သိပ်ကို အတင့်ရဲလွန်းတယ် .... မာမီသံ တို့ဆိုရင်တောင်မှ အဲ့လောက်အတင့်မရဲဘူး ဒီလူတွေကို အမြန်ဆုံးအရေးယူဖို့လိုတယ် .... ဒါကြောင့် ကျုပ်မြင်သလောက် သဲလွန်စ ကွင်းဆက်လေးတွေကို ဆွေးနွေးနိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ပါတယ် ....။ ၁။ အလံခိုးတဲ့ ကောင်တွေဟာ ... အလံခိုးတဲ့ ပါတီဝင်တွေ ပဲဖြစ်ရမယ် ... ၂။ ဒါဆို … အလံခိုးတဲ့ ပါတီဝင်တွေ ရှိတဲ့ ပါတီဟာ အလံခိုးတဲ့ ပါတီ ဖြစ်မှာပဲ ... ၃။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် အလံခိုးသူရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ အလံခိုးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပဲ ... ၄။ အလံကို ခိုးခိုင်းတဲ့သူဟာလည်း အလံခိုးချင်လို့ပဲ ဖြစ်ရမယ် ..... ကျုပ်မှန်းရင်းလွဲခဲ တယ် .... ၅။ ဒါအလံခိုးချင်နေတဲ့လူက ခိုင်းတာပဲဖြစ်ရမယ်။ .... ၆။ နောက်ကွယ်က နေ အလံခိုးချင်သူ လူတစ်စုက ကြိုးကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် ....။ ၇။ အလံခိုးတာကို သဘောကျတဲ့ အစိုးရကလည်း ဘာမှမလုပ်ပဲ ဒီအတိုင်းမသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင် အစိုးရလည်း အလံခိုးချင်သူနဲ့ အလိုတူအလိုပါ ပဲဖြစ်မှာသေချာတယ် ....။ ဒဲ့ပြောရရင် အစိုးရလည်း အလံခိုးချင်နေပုံရတယ်။ ၈။ ရဲတပ်ဖွဲ့လည်း အလံခိုးတာကို ချက်ခြင်းမဖော်ထုတ်နိုင်ရင် …. ဒါမှမဟုတ် အရေးယူဖို့ပျက်ကွက်ရင် အလံခိုးမှု ကို မသိမသာအားပေးအားမြှောက်ပြုသလိုဖြစ်မယ် … ဒီတော့ ဒီကိစ္စကိုရဲတွေသာ မသိချင်ယောင်ဆောင်ရင် ရဲတွေလည်း အလံခိုးရာမှာ အလိုတူအလိုပါလို့ ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်တယ် …. ၉။ ဒီလို အလံခိုးတဲ့ ကိစ္စကို ကျေနပ်စွာ ပြုံးနေသူ …. ကောင်းတယ်ဟု သတ်မှတ်သူ ... ခိုးတာတောင်နည်းသေးတယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုသူ အားလုံး ဟာ အဖွဲ့ချုပ် အလံကို ခိုးချင်သူများ ဖြစ်ရမယ်။ … အင်း ဆက်ပြီး စဉ်းစားရရင် အဖွဲ့ချုပ်က အင်အားနည်းပြီး အလံခိုးချင်သူများရင် အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ် ….. အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ဟုတ်ပြီ …. ဒါဟာ …. ကျုပ်တို့လို ပြင်ပပြည်သူတွေကိုပါ အဖွဲ့ချုပ်ကို အားအားဖြည့်စေချင်လို့ တပ်လှန့်လိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ် ….။ ဒါကြောင့် အလံခိုးသူ နဲ့ နောက်ကွယ်က အလံခိုးချင်လို့ ကြိုးကိုင်သူတွေဟာ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အလံခိုးချင်သူ အင်အားမမျှဘူးဆိုတာကို သွယ်ဝိုက်ပြီးပြလိုက်လို့ ကျေးဇူးတောင်တင်ရမယ် ... ဒီတော့ အလံခိုးသူတွေဟာ ကျေးဇူးရှင်တွေ (သို့) ကျေးဇူးရှင်နဲ့ ပတ်သက်သူတွေဖြစ်ရမယ် ... လောလောဆယ် ကျုပ်ရဲ့ စုံထောက် ပညာနဲ့ ဥာဏ်မှီတာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/10/2014 1 အကြံပြုခြင်း
ဌာနဆိုင် ရာအသီးသီး၏ ရာထူးအမြင့် နေရာများတွင် တပ်မတော်အရာရှိများအား ခန့်အပ်နေမှုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီကန့်ကွက်မည်
ဌာနဆိုင် ရာအသီးသီး၏ ရာထူးအမြင့် နေရာများတွင် လုပ်ငန်းမကျွမ်း ကျင်သည့် နယ်ပယ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ခန့်အပ်နေခြင်းသည် သက်ဆိုင် ရာဌာနကို ပျက်စီးဆုတ်ယုတ် စေသည့်အတွက် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပါတီမှ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ကန့်ကွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တပ်မတော်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အသက်လေး ဆယ်ပြည့်အရာရှိများကို အဆိုပါ ဌာနဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ပြောင်းလဲခန့်ထားသည့် အပေါ်တွင် ယင်းကဲ့သို့ပြော ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းစောသန်းမြင့်က ““လက်ရှိဝန်ထမ်း တွေကို ရာထူးတိုးရွေးချယ် ခန့်ထား တဲ့အခါ မိမိဌာနက ထူးချွန်တဲ့ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူ၊ ဝန်ထမ်း လုပ်သက်များတဲ့သူပဲ ဖြစ်ရမယ်။ စစ်တပ်၊ ရဲ စတာ တွေရဲ့ ဆွေမျိုးတွေ မလာရဘူး။ မိုးကျရွှေကိုယ်တွေကို မကြိုက်ဘူး”” ဟု ပြောသည်။
ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဌာန ဆိုင်ရာအားလုံးတွင် စစ်တပ်မှ ပြောင်းလဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများ ကိုသာ တွေ့နေရကြောင်း၊ ထိုသို့ ဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင် တာများ ကို နားမလည်သည့်သူကို အုပ်ချုပ်စေခြင်းသည် ဌာန၏ တိုးတက်ရာလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့နေသည့်အတွက် ရှုတ်ချကြောင်းဆက်လက်ပြောသည်။